सुरक्षा मापदण्ड पालनामा कडाई नभए लकडाउन, माघको दोस्रो सातामा दैनिक १९ हजार संक्रमित हुनसक्ने – Nepal Japan
सुरक्षा मापदण्ड पालनामा कडाई नभए लकडाउन, माघको दोस्रो सातामा दैनिक १९ हजार संक्रमित हुनसक्ने
नेपाल जापान ४ माघ २०:५७
मुलुकमा कोरोना भाइरसको नयाँ लहरले गति लिंदै गर्दा दैनिक अत्यधिक मात्रामा संक्रमित थपिने क्रममा आज मगलबार रेकर्ड नै ब्रेक भयो । आज १० हजारभन्दा बढी संक्रमित पुष्टि भएपछि हल्लीखली मच्चिएको छ । हिजो ६ हजार ७ य थपिंदा आज १० हजार २ सय नाघ्यो ।
संक्रमण तीब्रगतिमा फैलिइरहे पनि सुरक्षा मादण्ड पालनामा चासो दिइएको छैन र भीडभाड घटेको छैन । यस्तोमा स्वास्थ्य सचिव रोशन पोखरेलले स्वास्थ्य मन्त्रालय लकडाउनको विपक्षमा रहेको र यसका लागि भीड नियन्त्रण आवश्यक भएकाले त्यो मन्त्रालय एक्लैले गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ ।
मंगलबार संसद्‍को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा स्वास्थ्य सचिव पोखरेलले भन्नुभयो, भीड नियन्त्रण होस् । स्वास्थ्य मन्त्रालय लडकडाउनको विरुद्धमा छ । भीड नियन्त्रण हामीले मात्रै गर्न सकिँदैन ।
बैठकमा स्वास्थ्य सचिव पोखरेलले एक, दुई दिनमा पीसीआर परीक्षणको शुल्क समायोजन गर्ने र सरकारी ल्याबमा परीक्षण गर्नेलाई निःशुल्क गराउने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै समितिको छलफलमा मा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा। कृष्ण पौडेलले नेपालमा कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर माघ महिनाको दोस्रो साता ९जनवरी २४ देखि ३० तारिखसम्म० उत्कर्षमा पुग्ने प्रक्षेपण गर्नुभएको छ । माघको दोस्रो साताको मध्यतिर संक्रमितको संख्या १९ हजारभन्दा बढी हुनसक्ने आकलन पनि गरिएको छ ।
नेपालमा कोभिड(१९ को अवस्थाबारे प्रतिवेद पेस गर्दै डा. पौडेलले दैनिक संक्रमितको संख्या १९ हजार बढी देखिएसँगै अस्पताल भर्ना हुने संक्रमितको संख्यामा पनि बढोत्तरी हुने प्रक्षेपण गर्नुभएको हो ।
डा. पौडेलको प्रक्षेपण अनुसार सो समयमा करिब १३ हजार व्यक्ति अस्पताल भर्ना हुने देखिन्छ भने त्यसमध्ये करिब ३९४ जना क्रिटिकल हुने र एक हजार बढीमा जटिल प्रकारको संक्रमण देखिने छ । यस्तै ९ हजार ८ सय ४८ मा भने सामान्य लक्षण मात्रै देखिने छ ।
डा। पौडेलका अनुसार दोस्रो लहरमा भोगिएको अक्सिजन अभावलाई यो लहरमा दोहोरिन नदिन पनि मन्त्रालयले राम्रो तयारी गरेको छ । उनका अनुसार प्रदेश १ मा दैनिक कुल ४०८२, मधेस प्रदेशमा कुल ३७७८, वाग्मती प्रदेशमा कुल १२४२४, गण्डकी प्रदेशमा कुल २१२४, लुम्बिनी प्रदेशमा कुल ४३४०, कर्णाली प्रदेशमा कुल ३१२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल ४३६ सिलिण्डर अक्सिजन दैनिक उत्पादन हुने गरी क्षमता अभिवृद्धि गरिएको छ ।